Sicirka saliida ayaa hoos u dhacay – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Sicirka saliida ayaa hoos u dhacay
Sicirka saliida ayaa hoos u dhacay wax kabadan $ 1 foosto Arbacadii, ka dib koror badan oo la filaayey oo ku soo kordha suuqyada Mareykanka ka dib markii Reuters ay soo werisay in saxiixa heshiiska ganacsiga Mareykanka iyo Shiinaha uu dib u dhici karo illaa bisha Diseembar.
Brent cude wuxuu degay $ 61.74 foosto, hoos udhaad $ 1.22, ama 1.94 boqolkiiba, iyo West Texas Intermediate wuxuu xirmay $ 56.35 foosto, hoos 88 senti, ama 1.54 boqolkiiba.
Qiimayaashu waxay dheereysteen khasaaraha ka dib Reuters waxay sheegtay in kulan dhex maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping si loo saxeexo heshiis ku-meel-gaadh ah oo ganacsi oo muddo dheer la sugayay dib ayaa loo dhigi karaa illaa bisha Diseembar inta wadahadalladu sii socdaan.
Horaantii, qiimayaashu waxay hoos u dhaceen ka dib markii xog ka timid Maamulka Macluumaadka Tamarta ay muujisay badeecada ceyriin ee Mareykanka ay sare u kacday 7.9 milyan oo fuusto usbuucii hore, iyagoo garaacaya rajada falanqeeyayaasha ee kor u kaca 1.5 milyan foosto.
Bob Yager, oo ah maamulaha mustaqbalka ee magaalada Mizuho ee New York ayaa yidhi “Warbixinta maareynta macluumaadka waxba kuma bixiso.
Previous articleUS-China agreement on mutual phasing out of customs duties
Next article6 Faa’iido oo Yididiiladu u leedahay Nolosha Ragga iyo Dumarka
Komishanka Xakameynta HIV AIDS-ka oo Abaal-mariyay Xubno ka Mida Shaqaalahooda